Dejero gaa na Mkpokọta akụkọ ihe mere eme nke nlọghachi azụta mmadụ Space si American Ala | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » News » Dejero gaa na Mpempe akụkọ ihe mere eme nke ịlaghachi n'ụgbọ elu ikuku nke mmadụ site na Ala US
Dejero gaa na Mpempe akụkọ ihe mere eme nke ịlaghachi n'ụgbọ elu ikuku nke mmadụ site na Ala US
DejeroTeknụzụ ga-eme ka nkesa nri sitere na otutu igwefoto ọdọ mmiri nwere ike ikpuchi ngosipụta akụkọ ihe mere eme na International Space Station @ Photo nke David Sitak, WJTV ©
Dejero ga-eweta mbufe dị oke mkpa na nkesa vidiyo IP zuru ụwa ọnụ nke NASA na igbapụta SpaceX site na Kennedy Space Center
Waterloo, Ontario, Mee 20, 2020 - Dejero, onye ohuru n’ime uzo igwe ojii nke juputara n’igwe nke n’eme ka Emmy® nweta ihe ngbanye vidiyo na Njikọ Internetntanetị mgbe ekwentị ma ọ bụ n’ebe dịpụrụ adịpụ, esonyela na ndị na-eweta teknụzụ na-ebunye ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na teknụzụ dị iche iche. Dejero ndị ahịa, iji mee ka mkpuchi nke NASA na SpaceX mere ihe akụkọ May 27th nke mmalite ndị mbụ astronauts nke United States sitere na United States kemgbe afọ 2011.
DejeroTeknụzụ ga-eme ka nkesa nri dị n'ụwa niile site n'aka ọtụtụ igwefoto ọdọ mmiri edobere iji kpuchie mmalite a na ọdụ International Space Station. Arịrịọ maka ịkwado mgbasa ozi sitere na otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-achọ ụzọ iji nye mkpuchi mkpuchi dị egwu ma na-agbaso ụkpụrụ nduzi mmekọrịta mmadụ na saịtị NASA.
Nhazi ga-enye ohere DejeroNdị ahịa ụlọ ọrụ TV na-agbakwunye iji gbakwunye ojiji nke ọdọ mmiri igwefoto na Kennedy Space Center na ntanetị igwefoto ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ na ụbọchị na-eduga na mmalite enweghị ndị ọrụ mmadụ na saịtị.
Dejero A tinyela teknụzụ n’ime ngwa mgbasa ozi a na-eji eme ka o ruwe n’ebe a na-ahụ Kennedy Space Center. Maka ntinye ederede - na iji kwalite mgbasa ozi dị elu na ntinye aka pere mpe nke ụmụ mmadụ kwekọrọ n'ihe ndị chọrọ mgbanwe nke COVID-19 na-aga n'ihu - akụrụngwa mgbasa ozi na-eji ihe nkwụnye ọkụ 1U na-agbago. Dejero PathWay encoder / na-ebugharị ya maka nnyefe nke njirimara nke onyonyo pụrụ iche yana oke ala.
DejeroNetiwo nkesa vidiyo IP nke MultiPoint ga-enyere ntinye aka site na igwefoto dị iche iche na Ogwe ohere nke Kennedy ka a ga-ekerịta ya n’otu oge. Dejero ndị ahịa. Ezubere maka scalability, ma jikwa ya na igwe ojii, MultiPoint na-eme ka nkesa nke ihe dị elu, nke na-adịghị ala, na ntanetị oge vidiyo.
Dịka akụkụ nke ụzọ mgbasa ozi sara mbara maka mmemme, Dejero na-eme ka itinye ya n’ozi, kesaa na nkesa vidiyo Dejero ahịa.
Mpaghara Florida WJXT dị na mpaghara, onye otu n'ime ngalaba mgbasa ozi, na-eji abụọ Dejero Ndị nnata ụzọPoint ga-ewughachi, dochie ma nwepụta ihe ndị si na ya Dejero Ndị na-ebugharị PathWay dị na Kennedy Space Center. Anyị nwere ike wepụta ọtụtụ ihe oriri n'ụlọ anyị nke ụzọPoints abụọ karịa ka ọ dị ugbu a. Na ha abụọ, anyị nwere ngụkọta nke ọwa asatọ; abụọ ga-arara nye Kennedy Space Center. A ga-ekesa nri abụọ a na-aga n'ihu site na WJXT na akụrụngwa na-enuba igwe ojii anyị (AWS Elemental) maka iji rụọ ọrụ na ntanetị dijitalụ site na ụlọ ọrụ Graham niile mgbe ha dị site na NASA, ”ka Ali Hassan kwuru, Onye ntinye aka Onye Nkà na ụzụ, WJXT / WCWJ kwuru.
Na Mee 27th, ndị na-enyocha mbara igwe NASA Robert Behnken na Douglas Hurley ga-efega na International Space Station maka ebumnuche na-enweghị oge. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri na ọrụ a, njem a bụ ule ụgbọelu mbụ gbakwunyere maka azụmaahịa Elon Musk, na ọ ga-abụ ule mbụ nke sistemụ ụgbọelu na okirikiri ndị NASA na-aga na mbara igwe.
Dejero ndị ahịa nwere ike ịrịọ ịnweta nnweta n'efu na ndepụta ọdọ mmiri na www.dejero.com/spacexlaunch. A ga-enye nri nri ndị NASA abụọ a ka ha wee dịrị Dejero akụrụngwa na Mee 25th.
N'ịbụ onye ọhụụ nke njikọta a pụrụ ịdabere na ya na-aga ebe ọ bụla, Dejero ejikọta ọtụtụ njikọ Ịntanetị iji nyefee njikọta ngwa ngwa na ịdabere na achọrọ maka kọntaktị igwe ojii, ntanetị n'ịntanetị, na ngbanye nchebe nke vidiyo na data. Ya na ndị mmekọ ụwa zuru ụwa ọnụ, Dejero na-enye akụrụngwa, ngwanrọ, ọrụ njikọ, ọrụ ígwé ojii, na nkwado iji nye oge na bandwit dị oke egwu maka ọganihu nke òtù nke taa. Onye isi na Waterloo, Ontario, Canada, Dejero a tụkwasịrị obi maka mgbasa ozi mgbasaozi mgbasaozi na ikuku na netwọk Ịntanetị dị elu gburugburu ụwa. Maka ama ndị ọzọ, gaa na nleta www.dejero.com.
Dejero gaa na Mpempe akụkọ ihe mere eme nke ịlaghachi n'ụgbọ elu ikuku nke mmadụ site na Ala US - May 20, 2020
Dejero na-akwado atụmatụ CVIDID-19 na-aga n'ihu na azụmaahịa na ọwa mmiri - May 14, 2020
NC State University Ntugharị Ntugharị Mmepụta na IP Njikọ - May 6, 2020
Ali Hassan ndị astronauts ígwé ojii kpuchiri ihe ngwọta Dejero Douglas Hurley Ilọn Musk igbapu mmadu Ogwe Ọdụ Ụgbọelu International Ogige Ohere nke Kennedy Mmekọrịta MKM MKM Marketing Communications Otutu NASA Athzọ Robert Behnken Space SpaceX WayPoint WJXT WJXT / WCWJ 2020-05-20
Previous: NsụgharịNEXT nke Mahadum Warsaw họọrọ maka usoro ọmụmụ ndepụta okwu dị ndụ -
Osote: NAGRA NexGuard Forensic Watermarking Wins Abụọ Nleba Anya Gosiri Na NAB Show Express